mardi, 11 septembre 2018 22:15
Lisi-pifidianana: Anaovana fitsirihana
Amperinasa ny kaomisioana manokana hanao fitsirihana ny lisi-pifidianana. Mandrafitra azy io ny “expert” avy amin’ny Frankôfônia, Vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny fifidianana (CENI), solontenan’ny kandida, mpanao politika ary fiarahamonim-pirenena. Haharitra folo andro ny asany, aorian’izay dia hanao tatitry ny asa nataony io komity io.
Nialoha an’io ny fanadiovana nataon’ny CENI ny lisitra nanesorana ireo anarana miverimberina. 150.000 teo no hita, nisy 4000 vary mangatsiaka.
Hanovana inona ity fitsirihana ity? Efa nikatona tamin’ny 15 aprily ny lisi-pifidianana (RALE), tsy hisokatra intsony ka tsy ho afaka hampidirana izay tonga taona. Ny Fianakaviambe iraisam-pirenena etsy ankilany manosika ny hanatanterahana ny fifidianana amin’ny 7 novambra 2018.
mardi, 11 septembre 2018 19:43
55,89% ny taham-pahafahana BEPC 2018.
mardi, 11 septembre 2018 19:41
BEPC - Cisco Morondava
86,97% de taux de réussite, en hausse par rapport en 2017.
mardi, 11 septembre 2018 19:29
Sambava: Lehilahy iray maty tampoka teo ampampiadiana akoho
Nifamotoana ny tia adin’akoho teto Sambava ny alahady teo. Ho ampidirina anaty banja ny akohon’Abdalah antsoina hoe : “Peta-tsanga patte blanche”. 20.000Ar ny loka. Ao, hoy izy, izaho mihitsy no hiditra mpitsara ary hitazona ny famataran’andro.
Vao hanomboka anefa ny lalao dia teo izy no nitambosotra ka nifandrobahana nentina teny amin’ny SALFA Loterana Ampandrozonana, saingy teny an-dalana dia tapitra ny ainy.
Dia nanjombona ny tontolon’ny fampiadiana akoho teto Sambava.
Naterina eny an-trano fonenany Fokontany Soavinandriana Sambava ny razana. Mpamily ny asan’i Abdalah fahavelony.
mardi, 11 septembre 2018 19:27